Thursday August 22, 2019 - 11:45:28 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Magaalada Kismaayo waxaa ka bilaabatay doorashada madaxweynaha maamulka isku magacaabay 'Jubbaland'.
Xildhibaannada cusub ee maamulka iyo xildhibaanno kale oo ka socda dowladda Federaalka ayaa ku sugan hoolka doorashadu ka dhacayso oo ammaankeeda ay si aad ah u adkeeyeen ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Axmed Madoobe.
Kismaayo oo maalintii 2aad ku jirta Bandaw ayayna jirin cid geli karta iyo cid ka bixi karta, sidoo kale gudaha magaalada Kismaayo waxaa doorasho madaxweyne ku qabsanaya mucaaradka maamulka Jubbaland.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in siyaasiyiin uu kamid yahay Cabdi Rashiid Xidig ay iyana qabsanayaan doorashooyin madaxtinimo, boqolaal katirsan ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa ilaalinaya ammaanka goobta ay doorashada ku qabsanayaan siyaasiyiinta ujan jeera dhanka dowladda Federaalka.
Dagaallo Khasaara badan dhaliyay oo ka dhacay duleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo.
Daawo Video: 13 qof Carruur iyo Haween isugu jira oo Gaajo ugu dhintay magaalada Muqdisho!
Dab Khasaara hantiyadeed dhaliyay oo ka kacay magaalada Jigjiga.
Aabe iyo labadiisa Wiil oo ku dhintay Dab ka kacay guri kuyaal magaalada Baydhabo.
170 qof oo ku dhintay diyaaradda ku burburtay duleedka Magaalada Dahraan.
Maleeshiyaadka Xaftar oo dagaal ku galay magaalada Sirta ee dalka Liibiya.